Mihazona ny fiainana ara-panahy
Hoy Jesosy taminy: Izaho no mofon’aina; izay manatona Ahy tsy mba ho noana, ary izay ary tsy mba hangetaheta intsony. Jao 6:35
Miteny amintsika ao amin’ny Teniny Andriamanitra. Eto no ananantsika amin’ny fomba mazava indrindra ny Toetrany, ny fifandraisany amin’ny olona, ary ny asa lehiben’ny fanavotana. Eto no misokatra eo anoloantsika ny tantaran’ireo patriarka sy mpaminany ary ireo olo-masina hafa taloha. Izy ireo dia “olona tahaka antsika ihany” Jak. 5:17. Hitantsika ny fomba nitoloman’izy ireo tao anatin’ny fahadisoam-panantenana tahaka ny antsika, ny fomba nahalavoan’izy ireo teo ambany fakam-panahy tahaka ny nahazo antsika, kanefa mbola nitraka indray ka nandresy tamin’ny alalan’ny fahasoavan’ANdriamanitra; ary eo am-pibanjinana, dia mahazo fampaherezana isika eo amin’ny fikelezantsika aina hanaraka ny fahamarinana. Rehefa eo ampamakiana ireo fanandramana sarobidy nolalovan’izy ireo isika, ny fahazavana sy ny fitiavana ary ny fitahiana azon’izy ireo mba hankafizina, ary ireo asa izay voatefy tamin’ny alalan’ny fahasoavana natolotra azy ireo, ny fanahy izay nanindry mandry azy ireo dia mandrehitra lelafon’ny fanafahana Masina ao am-pontsika sy faniriana mba hanahaka azy ireo eo amin’ny toetra – tahaka azy ireo miara-mandeha amin’Andriamanitra.
Nanambara ny Soratra Masin’ny Testamenta Taloha i Jesosy – ary akory ny haben’ny fahamarinan’izany ao amin’ny Vaovao – “Ary ireny no manambara Ahy” Jao 5:39. Raha te hifankazatra amin’ilay Mpamonjy ianao, dia mianara ny Soratra Masina. Fenoy ny tenin’Andriamanitra ny fo manontolo. Izany no loharano velona, izay hampitony ny hetaheta mandoro anao. Izany no mofo velona avy any an-danitra (...). Izay hanintsika sy sotrointsika no manefy ny vatantsika; ary eo amin’ny fitantanana voajanahary, toy izany koa ny fitantanana ara-panahy: izay saintsainintsika no hanome hery sy tanjaka ny toe-panahintsika.
Ny fiainana ara-panahy dia tsy maintsy hazonina amin’ny fifandraisana amin’i Kristy amin’ny alalan’ny Teniny. Tsy maintsy mitoetra amin’izany ny saina, tsy maintsy fenon’izany ny fo. Ny Tenin’Andriamanitra mitoetra ao am-po ary ankamamiana amim-pahamasinana sy ankatoavina, amin’ny alalan’ny herin’ny fahasoavana’i Kristy dia afaka manamarina ny olona, ary hihazona azy ho marina.
Rehefa noraisina ary mifehy antsika tanteraka ireo Tenin’ny torolalany, dia ho fanatrehana mitoetra amintsika i Jesosy, mifehy ny fisainantsika sy ny hevitsika ary ny asantsika. I Jesosy Kristy no zavatra rehetra ho antsika – ny voalohany, ny farany, ny tsara indrindra amin’ny zavatra rehetra.